Soo hel in ka badan 2500 ilo lacag la'aan ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | General, Khayraadka, Tababarada
Markasta oo aan ka hadalno burush, waxaan ka hadlaynaa adduun xor ah. Waxaa jira kuwo badan oo aad kuheleyso sawirkaaga oo qaabab kala duwan ah hadana, markii aad ku dhiirato internetka, waxaad heleysaa qaar badan oo aadan laheyn. Waxaan dhahnay 2500 waxayna u egtahay xad la'aan. Xaqiiqdii waad ku turunturoon doontaa mid aad horay u haysatay, laakiin dhammaantood, intee baa ka badan?
Hagaag, labadan kun iyo shan boqol, waxay u soo diyaar garoobeen qaybo kala duwan. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad hesho nooca burushka aad u baahan tahay. Laga soo bilaabo astaamaha illaa qaabdhismeedka, iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada. Waana sida aad sifiican u ogtahay, astaamaha shabakadaha bulsheed aad bey u badali karaan, halkan waxaad ku baari kartaa taas oo ah kuwa hal-abuurnimo badan oo suurtagal ah boggaaga.
1 Naqshadeynta iyo sawirada
2 Kheyraadka kale: Casharrada
3 Hadiyadaha 3D
Naqshadeynta iyo sawirada
Si aad shaqo kasta u qabato waxaad u baahan doontaa xoogaa ilo ah. Qaybtaan waxaan ku soo bandhigi doonnaa xiriiriyeyaal si aad u hesho wax kasta oo aad u baahan tahay. Ama xitaa adigoon ubaahnayn, waad ka faa'iideysan kartaa dhammaantood. Ha ku khasaarin, xiriiriyayaashu qaab casri ah ayey u baxayaan mar walbana way fiicantahay in qalabka kombiyuutarka lagu haysto.
Halkan 40 nooc oo qaabab kala duwan ah qaraar sare oo bilaash ah.
Ku kobci meheraddaada 21ka shey ee buugyarahan.
In kasta oo haddii ganacsigu aanu adiga kuu soconaynin, ama taadu ay tahay inaad abuurto riwaayado, ka faa'iideyso 20 nooc oo xaashi ah dhacdooyinkaaga.
In kasta oo Kirismasku dhammaaday, halkan waad tagtaa 10 mashruuc Sannadka soo socda, waligood kama baxayaan qaabka.
Soo hel calaamadaha fikradahaaga.
Hadaad raadineyso astaamo inaad dhex gasho shabakadaha bulshada shabakadda, halkan waxaa ku yaal noocyo badan oo ka mid ah. Xitaa haddii aad ugu baahan tahay iyaga tuubooyinka baaritaanka!
Soo Degso 300 dulinka bilaashka ah Shirkadda Basiliq, iyagu aad bay waxtar u leeyihiin.
Ilaha dhaqaale ahaan, haddii ay mar labaad noqdaan kuwo moodada, halkan waxaad ku haysataa waxa ugu fiican 56 ilo ku saabsan qoraallada. Ama 48 noocyada ugu fiican ee ku saabsan tattoos.
Si baaskiil fondos de pantalla, 8 ayaa loo siiyay inay ku dhiirrigeliyaan hal-abuurkaaga, taas oo la hubo inay wax badan noqon doonto.
Iyo sida had iyo jeerSi aad u dhammeysato kheyraadkan quruxda badan ee hal-abuurka Blok iyo websaydhada kale na siiyaan, waad soo dejisan kartaa illaa 60 ka mid ah burushyada bilaashka ah ee ugu hooseeya xiriirka hoose: 60 burush bilaash ah. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay
Kheyraadka kale: Casharrada
Kheyraadka had iyo jeer uma yimaado qaab burush, qaabab, icons, ama nooc kale oo qalab la soo dejisan karo sawirkaaga. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa iyaga oo ah qaab fiidiyow ah oo cashar ahaan ah. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aadan lahayn tababar hore, waxaad si fudud ugu heli kartaa hal guji. Waa run in badan oo ka mid ah casharradii ugu fiicnaa lagu sharxay Ingiriisiga laakiin sidoo kale, in yar oo caqli gal ah ayaan maaraynaynaa inaan fahamno waxa ay ku sharraxayso fiidiyowga.
Waad ku mahadsantahay barnaamijyada sida YouTube, Vimeo ... Isdhexgalka, awood u lahaanshaha istaagga iyo ciyaarta, waxay noo sahlaysaa inaan is fahmi karno iyo xitaa inaan soo uruurinno macluumaad intaadan aadin xarunta oo keliya. Sidoo kale waa run in tani markasta aysan fiicnayn, laakiin, haddii aadan uga faa'iideysan karin qaab kale oo aan ahayn tagista kanaal, samee. Wax yar in la ogaado ayaa ka wanaagsan in aad gebi ahaanba iska indhatirto.
Iyo inkasta oo markasta oo aan ka bilaabanno adduunkan aan u adeegsanno sawir-gacmeedka marka ugu horreysa, sawir-qaade ama barnaamijyo kale sida sawirka qaraabada, iyaguna aad ayey muhiim u yihiin. Maaddaama ay u shaqeeyaan si vector ah waxayna na siinayaan xorriyad weyn si aan u abuurno astaamo ka soo xoqidda, tusaale ahaan. Halkan waa inaad haysataa 100 casharro layaableh oo kusaabsan sawirqaade. Laga soo bilaabo sawirada retro ilaa logos.
Ku saabsan qorista qoraalka sidaan ku aragnay ilaha hore, waxaa jira casharro badan oo lagu bixiyo muuqaal u gaar ah. Haddii taasi ay ahayd wixii aad raadineysay bilowgii iyo sawir-qaadashada, waa kaa socotaa. 5 casharro waaweyn oo ku saabsan sida wax looga beddelo qaabka qoraalka si uu ugu ekaado 3D, oo leh qaab bir ah ama lagu dhex daray sawir.
Marar badan waxaan u baahanahay inaan wax tusno, sida naqshadeynta dharka cusub, oo aan u muuqan wax wanaagsan mooyee haddii lagu daro moodeel 3D ah. Halkan waxaad ku haysataa xayawaanno, mannequins iyo qalabyo lagu qurxiyo fikradahaaga. 29 moodal 3D oo bilaash ah.
Ha ka walwalin markaad soo dejiso naqshadahan. Hadaadan aqoon sida loo dhexgalo dhowr jeer oo isku day ah ka dib ama aadan rabin inaad madaxa ka jebiso isagoo ah markii kuugu horreysay. Daawo casharradan ugu horeeya oo waxaad yeelan doontaa fikrad wanaagsan sida loo sameeyo.
Barashada bilowga ah. Mise waxay ku naanayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Soo hel in ka badan 2500 ilo lacag la'aan ah
waxyaabo badan ayaa la bixiyaa
Haddii aad jeceshahay naqshadeynta garaafka waa inaad ku leedahay kanaal wax ku ool ah YouTube-ka